Lacagaha Gacanta lagu qaado (Cash) iyo faafidda cudurka Coronavirus - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Lacagaha Gacanta lagu qaado (Cash) iyo faafidda cudurka Coronavirus - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Talooyinka Caafimaad ee la soo jeediyay ayaa waxaa kamid ahaa in la isticmaalo Adeega Talefonada Mobile-ka lacagaha la isugu diro ee Mobile Money transfer iyo kaararka, iyadoo laga fogaanayo lacagaha Noodka (Cash) ah ee gacanta lagu qaado intii suuragal ah, haddii la isticmaalana gacmaha la iska dhaqo.
Previous articleDadka Coronavirus ugu dhintay Talyaaniga oo ka batay Shiinaha (Akhriso tirada guud ee geerida iyo..)
Next articleMadaxweynaha Hirshabeelle oo shaqadii ka eryay 4 Wasiir. (Akhriso Wasiirada cusub ee la magacaabay)